एक पट मा Chrysanthemums। मर्मतका र खेती को सुविधाहरू
तपाईं आनन्दित हुन चाहनुहुन्छ भने, chrysanthemums बढ्न। त्यसैले तिनीहरू जापान भन्छन्। तपाईं बढ्न प्रयास भने सुन्दर र दुःखी शरद ऋतु फूल, वर्ष एक फरक समयमा प्रसन्न गर्न सक्नुहुन्छ एक पट मा chrysanthemums। एक अध्ययन को योग्य - तिनीहरूलाई हेरचाह एक कला हो।
यस युनानी नाम फूल "zlatotsvetnym» एक पटक ( «χρῡσανθής»)। को बोट अब बारेमा एक सय प्रकार र सबै कल्पना रंग को दुई हजार प्रजातिहरू छ किनभने यो एक धेरै लामो समय भएको हुनुपर्छ। हामीलाई ओपेरा कार्टून अक्षर चीन र जापान संग प्रतिस्पर्धा गर्न उनको घर कल गर्ने अधिकार को लागि, पूर्व आए। दुवै देशका, यो फूल राष्ट्रिय धन, मानिन्छ सम्मान मा विशेष दिन चाडहरूमा स्थापित। जापान, ओपेरा कार्टून अक्षर साधारण इम्पेरियल शक्ति को एक प्रतीक मानिन्छ। उच्चतम पुरस्कार awarding को अभ्यास - को ओपेरा कार्टून अक्षर को आदेश - पनि जापान अवस्थित छ।
Chrysanthemums - बारहमासी Ornamental बिरुवाहरु परिवार Aster। 20 80 सेमी यस shrub उचाइ - विविधता आधारमा। फूल संधै शरद ऋतु परिदृश्य संग सम्बन्धित छ, तर वर्ष को कुनै पनि समय मा उत्पादक र विक्रेता बाट यो हेर्न: लामो पहिले कसरी पट मा chrysanthemums बढ्न सिके। तिनीहरूलाई हेरचाह को पाठ्यक्रम, विशेष आवश्यक छ। यो छोटो समयका फूल हो कि मनमा पहिलो कुरा। प्रति दिन भन्दा बढी दस घण्टा ज्योति प्राप्त भएको बोट ब्लूम वा एकल फूल उत्पादन हुनेछ छैन। तसर्थ, यस SPOILED को पट मा राख्न hesitating पूर्वी राजकुमारी, अनुकूल प्रकाश अवस्था यसलाई प्रदान गर्न सक्षम हुनुपर्छ। र तापमान शासन उथला ओपेरा कार्टून अक्षर लागि 17-18 डिग्री भन्दा कुनै उच्च हुनुपर्छ।
हेरविचार , धूलो विरुद्ध सुरक्षा छिडकाव - - को छोड्छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले पनि अधिक संवेदनशील फूल भन्दा थुनामा को अवस्थामा परिवर्तन गर्ने हो। केहि बोट मन छ भने, तल्लो पात सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो र crumble सुरु - chrysanthemums सडक "Oaks" को किसिमहरु गर्ने बढ्न गर्नेहरूका लागि एक परिचित ढाँचा। melkotsvetnyh ग्रेड लागि पर्याप्त एक मोटी झाडी प्राप्त गर्न शीर्ष prischipnut। र तपाईं ठूलो फूल आवश्यक छ भने, तिनीहरूले मात्र odnosteblevym विधि हुर्किसकेका गर्न सकिन्छ।
धेरै पानी, यसको आफ्नै विशेषताहरु छन्। यी रंग आफ्नो whims साँचो हो: तिनीहरूले कुनै पनि सुक्खा वा waterlogged माटो वा हावा खडा गर्न सक्दैन - यो एक ओपेरा कार्टून अक्षर हो! एक पट हेरविचार मा तिनीहरूलाई प्राकृतिक अवस्थामा भन्दा बढी troublesome। बाहिरी उदाहरण, तिनीहरूले वृद्धि तापमान, पनि सूर्य सहनु गर्न सजिलो छन्। सुक्खा माटो - सुरक्षित वर्षा को जलप्रलय जरा, र त्यसपछि बच्न सक्नुहुन्छ। को पाठ्यक्रम, उचित सीमा भित्र।
chrysanthemums बढ्दै कोठा मा - एक कोठा वा ग्रीनहाउस - पाठ्यक्रम, खुला फूल बगैचा सामग्रीहरू भिन्न हुन्छ। छैन कम्तिमा किनभने सडक मूल सिस्टम रहन्छ छ, जाडो महिनामा र वर्ष वर्ष भित्र तिनीहरूले Annuals रूपमा हुर्किसकेका छन् जबकि, नयाँ फूल ल्याउँछ पछि। र यो छ - अज्ञानता बाहिर। फूल पछि Chrysanthemums को जरा मा कटौती गर्न सकिँदैन र गाढा सुन्दर ठाउँ मा राख्नु - यो जाडो लागि। वसन्त मा, प्रकाश गर्न ल्याउन टीन सुरु गर्न - नयाँ फूल प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
तर के धेरै निश्चित लागि थाह छैन - एक औषधीय बिरुवा - को ओपेरा कार्टून अक्षर छ। आफ्नो पत्रदल चिया को टनिक, उत्थान, सकारात्मक भएको हृदय प्रणालीमा प्रभाव कार्य र सर्दी लागि सिफारिस गरिएको छ - कोठा मा यी रंग, तिनीहरूलाई प्रशंसा, ताजा tart स्वाद inhaling आनन्द र शान्ति पूर्ण अर्थमा दिन सक्षम छ को धेरै उपस्थिति, मात्र छैन विरोधी भडकाऊ र antipyretic रूपमा।
र त्यसपछि chrysanthemums प्रेम छैन - शरद ऋतु को फूल?
फलाम सल्फेट को वसन्त गार्डन प्रक्रिया। वसन्त बगैचा यूरिया उपचार
रंग विवरण संग Annuals स्टार्टर को योजना बेड
राम्रो गाजर बीउ: राय माली
विन्डोज सर्भर अद्यावधिक सेवाहरू (WSUS): कन्फिगुरेसन। WSUS अफलाइन अद्यावधिक
मास्को मा सबै भन्दा राम्रो रेस्टुरेन्ट स्तर (2014)
एक Rapper कसरी बन्न: चरण निर्देशनहरूको द्वारा कदम। एक प्रसिद्ध Rapper कसरी बन्न?
टमाटरको बीउ - ग्रीनहाउसहरूको लागि र न केवल
वर्षौंदेखि सिद्ध गुणवत्ता र शैली, - जीन्स "मुस्ताङ"